Umenzi wefonti yinkqubo esekwe kwi-Illustrator ukwenza iifonti | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukususela kumzekeliso iifonti ezikumgangatho ophezulu zinokwenziwaNangona sisebenzisa enye inkqubo, efana noMenzi weFonti, ngokuqinisekileyo siya kufumana okuninzi kuyo. Isiseko yinkqubo enikezelwe ekudaleni iifonti kwaye inokuba yinto ebaluleke kakhulu xa siyiqhela.
Umenzi wefonti ekuzisela amandla okwenza iifonti ngexabiso elifikelelekayo, $ 49. Inkqubo ethi Ifuna i-Illustrator CC kwi-Mac OsX okanye iWindows kwaye ekuvumela ukuba wenze iifonti ngemizuzu, uguqule nayiphi na imilo ibe luhlobo lochwethezo, uthumele iifayile ze-OpenType, wandise ikopi ye-Illustrator CC kwaye uyifake kuzo zombini iMac kunye nePC.
Ngoku ngokuqinisekileyo umbuzo izizathu zokufumana inkqubo yolu hlobo xa sele unayo i-Illustrator CC, esele ihlawule imali yethu ngenyanga.
Impendulo kungenxa yokuba amandla e-Illustrator's Bézier curves anjalo ichaneke kancinci kwaye ibuthathaka Ngaphezu kwezo unokufumana kubahleli befonti njengale, Glyphs okanye iRobofont. Xa uchitha iiyure ezininzi phambi kwe-Illustrator, ungabona ukuba ukusebenzisa le nkqubo kufana nokubethelela isikrufu eludongeni kuba awunayo i-drill.
Inkqubo ingangqale ngqo kubayili Bazinikezele kuphela ekudaleni iifonti, kodwa njengenkxaso inokufika ngokufanelekileyo xa ufuna ukwenza ngokwezifiso ifonti yomthengi. Ikwanomnye umgangatho oququzelela ukwaziswa kwihlabathi loyilo lohlobo lweengcali ezininzi okanye abafundi abafuna izixhobo zokugqibezela umsebenzi wabo.
Omnye Isindululo esinomdla ngexabiso leedola ezingama-49 kwiwebhusayithi yakho. Ukuba ufuna ukufikelela kwiqela lamagama asimahla ungaphoswa kukuqeshwa ngaphambi kokungena ukuba ugxa wam uFrancisco umisele izolo enokuthi nayo iluncedo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Umenzi wefonti wakunceda wenze iifonti yakho kwi-Illustrator